သခင်ယေရှုက ဘယ်သူလဲ? သခင်ယေရှုဟာ ဘုရားလား? - အထောက်အထားနဲ့တကွကြည့်ပါ - မျက်ကန််းယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယုံကြည်စရာမလို်ပါ။
ဘုရားကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရှိခြင်း
ယေရှုက သူ ဘုရားပါလို့ ပြောခဲ့သလား?
ဘုရားသခင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကို အဖြေပေးပါသလား?
ယေရှုဟာဘုရားသခင်လား? ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါသလား? ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာထဲကိုလေ့လာပြီး သူ့ကိုယုံကြည်တာ မျက်ကန်းယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သက်သေပြချက်ကို ရှုမြင်ပါ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲ အရင်ဖွင့်မပြဘူးဆိုရင် ဘုရားတည်ရှိသလား၊ ပြီးတော့ သူဘာနဲ့တူသလဲဆိုတာကို ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြောပြဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဘုရားရဲ့ဖွင်ပြတဲ့သဲလွန်စများ ရှိသလားဆိုတာကြည့်ဖို့ သမိုင်းကိုခြုံငုံပြီးကြည့်ရပါမယ်။ ရှင်းလင်းတဲ့သဲလွန်စတစ်ခု ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ ခန့်က ပါလက်စတိုင်းရဲ့နှုံခြာတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာ မြင်းဇောင်းတစ်ခုမှာ သူငယ်တော် တစ်ပါး မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ချိန်မှာတော့ တကမ္ဘာလုံးက ယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းကို ခုံလုံတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကျင်းပ နေကြဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုဟာဘုရားလား? ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါသလား?
“ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် (ယေရှု၏) သြဝါဒပေးတော်မူခြင်းကို အလွန်အံ့သြကြ၏။” လို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ “ကျမ်းပြု ဆရာများနည်းတူမဟုတ်၊ အစိုးရသောသူနည်းတူ ဆုံးမသြဝါဒပေးတော်မူ၏”၁ လို့ ဆိုထားတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း မကြာခင်မှာတော့ သူမည်သူဖြစ်ကြောင်း တုန်လှုပ်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကြေညာချက်တွေကို ဟောပြောလာ တယ်။ သူဟာ လေးစားလောက်ဖွယ် တရားဓမ္မဆရာ (သို့) တမန်တော်တစ်ဦးထက်မက များစွာကြီးမြတ်ကြောင်း စတင် ခိုင်းနှိုင်းလာပါတော့တယ်။ သူကိုယ်တော်တိုင်ဟာ ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ မိန့်ဆိုလာပါတယ်။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာကို သူ့သွန်သင်မှုတွေရဲ့ ဗဟိုအချက်အဖြစ် ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူ့နောက်လိုက်များကိုမေးခဲ့တဲ့ အရေးအကြီးဆုံးမေးခွန်းကတော့ “ငါ့ကို အဘယ်သူဖြစ်သည် ဆိုကြသနည်း?” ဆိုတာပါပဲ။ ပေတရုက “ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် ဖြစ်တော်မူသည်”၂ လို့ ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ ယေရှုဟာ တုန်လှုပ်ခြင်းလည်းမရှိ၊ ပေတရုကိုလည်း ပြစ်တင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ အဲဒီအစား သူ့ကိုချီးမွမ်းပါတယ်!
ယေရှုဟာ မကြာခဏ “ငါ၏ခမည်းတော်” လို့ ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပြီး ကြားနာသူများက သူ့စကားရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝ နားလည်ကြတယ်။ “ဥပုသ်နေ့ကို ဖျက်သည်သာမက၊ ဘုရားသခင်ကို မိမိအဘဟုခေါ်၍ မိမိကိုဘုရားသခင်နှင့် ပြိုင်နှိုင်းတော်မူသောကြောင့်၊ ယုဒလူတို့သည် ကိုယ်တော်ကိုသတ်ခြင်းငှာ သာ၍ရှာကြံကြ၏”၃ လို့ ကျနော်တို့သိရပါတယ်။
တခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာတော့ သူက “ငါသည် ငါ့ခမည်းတော်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း [တစ်ဦးတည်း] ဖြစ်သည်” လို့ မိန့်ဆို ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာပဲ ယုဒများကသူ့ကို ကျောက်ခဲ့နဲ့ပေါက်သတ်ဖို့ ဟန်ပြင်ကြတော့တယ်။ အဲဒီတော့သူက ခမည်းတော်ရဲ့ အခွင့်နဲ့ ပြုလုပ်ပြသခဲ့တဲ့ အမှုတွေထဲက အဘယ်အမှုအရာကြောင့် သတ်လိုကြသလဲလို့ မေးခဲ့တယ်။ သူတို့က “[ထို] ကောင်းသောအမှု[များ]ကြောင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်မဟုတ်။ သင်သည် လူဖြစ်လျက်ပင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ယောင်ဆောင်၍ ဘုရား သခင်ကို လွန်ကျူးသောစကားကြောင့် ခဲနှင့်ပစ်မည်”၃ လို့ တုံ့ပြန်ကြတယ်။
သူ့ရဲ့အကုအသကိုခံယူလိုတဲ့အတွက် ခေါင်မိုးကိုဖောက်ပြီး သွက်ချာပါဒရောဂါတစ်ယောက်ကို ချပေးကြတဲ့အခါ ယေရှုက “ချစ်သား၊ သင်၏အပြစ်များကို လွှတ်တော်မူပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များက ချက်ချင်းဆန့်ကျင်ပြီး “အဘယ်ကြောင့် ဤသူသည် ဤသို့ပြောဆိုသနည်း? ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူးပြောဆိုပြီ! ဘုရားမှတပါး အဘယ်သူ အပြစ်ကိုလွှတ်နိုင်သလော?” လို့ ပြောဆိုကြတယ်။
ယေရှုဟာ ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးခံနေရတဲ့အချိန်မှာ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက သူ့ကို တည့်တိုးပဲ “သင်သည် ခရစ်တော်တည်း ဟူသော၊ မင်္ဂလာရှိသော၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် မှန်သလော?” လို့ မေးခဲ့တယ်။
ယေရှုက “မှန်၏” လို့ ဖြေပါတယ်။ “နောင်ကာလ၌ လူသားသည် တန်ခိုးတော်၏လက်ယာဘက်၌ထိုင်လျက်၊ မိုးတိမ်ကို စီး၍ ကြွလာသည်ကို သင်တို့မြင်ရကြလတ္တံ့” လို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒီအခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းက မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်ဖြဲပြီး “အဘယ်သက်သေကို လိုသေးသနည်း? ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ ပြောသောစကားကို သင်တို့ကြားရပြီ”၅ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုရဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်နွှယ်မှုဟာ အလွန်နီးကပ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောကို ဘုရားရဲ့စိတ်နေသဘောနဲ့ ထပ်တူပြု လေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ကိုသိရှိတာဟာ ဘုရားကိုသိရှိတာပါပဲ။၆ သူ့ကိုမြင်တွေ့တာဟာ ဘုရားကိုမြင်တွေ့တာ ပါပဲ။၇ သူ့ကိုယုံကြည်တာဟာ ဘုရားကိုယုံကြည်တာပါပဲ။၈ သူ့ကိုလက်ခံရရှိတာဟာ ဘုရားကိုလက်ခံရရှိတာပါပဲ။၉ သူ့ကို လွန်ဆန်မုန်းတီးတာဟာ ဘုရားကိုလွန်ဆန်မုန်းတီးတာပါပဲ။၁ဝ ပြီးတော့ သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတာဟာ ဘုရားကိုဂုဏ်ပြုတာပါပဲ။၁၁
ယေရှုဟာဘုရားလား? - ဖြစ်နိုင်ချေရှင်းလင်းချက်များ
“ခရစ်တော်ရဲ့အခိုင်အမာပြောဆိုချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ချေ (၄) ခုသာရှိပါတယ်။ သူဟာ လူလိမ်တစ်ယောက်၊ စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်၊ ဒဏ္ဍာရီသက်သက် ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် အမှန်တရား (သမ္မာတရား) ဖြစ်မယ်။”
ယေရှုဟာ သူ့ကိုယ်သူဘုရားပါလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ လိမ်ညာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ သူဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိပါ လျက်နဲ့ သူ့သွန်သင်မှုတွေမှာ သြဇာသက်ရောက်စေဖို့အတွက် ပရိသတ်ကို တမင်တကာ လှည့်စားခဲ့တာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါမယ်။ လူအနည်းငယ်က အဲဒီရှုထောင့်ကို ဆုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ ယေရှုဘုရားဖြစ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်တဲ့သူတွေပင် သူဟာ ကြီးမြတ်တဲ့ နီတိသွန်သင်ရေးဆရာဆိုတာ အတည်ပြုကြတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ သူတို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်နှစ်ခုဟာ ဆန့်ကျင်နေတယ် ဆိုတာ သတိမပြုမိကြပါဘူး။ သူ့ရဲ့အဓိကအကျဆုံးသွန်သင်ချက် -- သူ့ရဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်း -- ကို ထောက်ရှုပြီးမှ ယေရှုဟာ ပိရိတဲ့လူလိမ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရင်တော့ သူဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကြီးမြတ်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားသွန်သင်ရေး ဆရာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေက ယေရှုဟာရိုးသားတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်လှည့်စားခံရတာဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားလို့ ထင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ စိတ်မကျန်းမာတဲ့လူပါ။ ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မကျန်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာ တွေရှိရတဲ့ ဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ မူမမှန်ခြင်းလက္ခဏာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒါ့ထက် ဖိစီးမှုတွေ ကြားမှာပင် အခိုင်မာဆုံးတည်ငြိမ်မှုရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။
တတိယမြောက်ရှုထောင့်တစ်ခုကတော့ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်တဲ့သူ့နောက်လိုက်များက သူ့ကိုဂုဏ်မြှောက်ပြောဆိုကြတာ ကြားတဲ့အခါမှာ သူထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သူငြင်းဆိုလိုက်ရင်လည်း နောက်လိုက်များကို စွန့်လွှတ်ရ တော့မယ်မို့ မငြင်းဆိုဘဲ သူတို့ထင်မှတ်တဲ့အတိုင်း ဟန်ဆောင်နေခဲ့တယ်။ ဒီသီအိုရီကိုတော့ ယနေ့ခေတ်ရှေးဟောင်း သုတေသနပြုချက်က သိသာထင်ရှားစွာ ချေပလာခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့အတ္ထုပတ္တိကျမ်း (၄) ဆူဟာ ယေရှုကို ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့၊ ကြားနာပြီး နောက်လိုက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းမှတ်တမ်းတွေမှာ ယေရှုကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကပဲ အတည်ပြုခဲ့တဲ့ တိကျသေချာတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ဖော်ပြချက်တွေ ပါရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကု၊ ရှင်လုကာနဲ့ ရှင်ယောဟန်တို့ရေးသား ပြုစုတဲ့ ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းက ဒီလောက်မြန်မြန်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးသလဲဆိုရင် ဒီလေးကျမ်းကို အစောပိုင်းမှာ (မျက်မြင်သက်သေတွေရှိနေစဉ်) ရေးသားခဲ့လို့ပါပဲ။ နောက်ရာစုနှစ်တွေလွန်ပြီးမှပေါ်လာတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်ဆန် လွဲမှားတဲ့သွန်သင်မှုတွေပါတဲ့ အခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေနဲ့ မတူပါဘူး။
ယေရှုဟာလူလိမ်တစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ရောဂါသည်၊ ဒါမှမဟုတ် သမိုင်းအထောက်အထားမမှန်ကန်ဘဲ လုပ်ကြံ တီထွင်ထားတဲ့လူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့တစ်ခုတည်းသောရပ်တည်ချက်ကတော့- ယေရှုဟာ သူဘုရားပါလို့ ပြောခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ အသိစိတ်ရှိရှိ အမှန်အတိုင်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘာပါလို့ ကြွေးကြော်တာ သိပ်အရေးမပါပါဘူး။ စကားလုံးတွေက တန်ဖိုးမရှိ ပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို ကြွေးကြော်လို့ရတာပဲ။ ဘုရားပါလို့ကြွေးကြော်တဲ့ တခြားလူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘုရားပါလို့ပြောနိုင်တယ်၊ သင်လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးဖြေရမယ့်မေးခွန်းက “ကျနော်တို့ရဲ့ကြုံးဝါးမှုကို သက်သေအခိုင်အလုံပြဖို့ ဘာအထောက်အထားတွေရှိသလဲ?” ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ သင်ကျနော့်အဆိုမှား ယွင်းကြောင်းထောက်ပြဖို့ ငါးမိနစ်တောင် မကြာပါဘူး။ သင့်အဆိုကို ငြင်းဆိုဖို့လည်း ဒီ့ထက်မကြာပါဘူး။
ဒါပေမယ့် နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုငြင်းဆိုဖို့တော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ သူ့ကြွေးကြော်ချက်ကိုကျောထောက်နောက်ခံဖို့ သူ့မှာအထောက်အထားတွေ များစွာရှိပါတယ်။ သူက “ငါ့ကိုမယုံသော်လည်း ထိုအမှု [ငါပြုသောအမှု] တို့ကိုယုံကြလော့။ .. ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည်ခမည်းတော်၌ ရှိသည်ကိုလည်းကောင်း ယုံ၍သိမှတ်ကြ လိမ့်မည်”၁၂ လို့ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။
ယေရှု၏အသက်တာ - သူ၏ထူးခြားသောကိုယ်ကျင့်စရိုက်
ယေရှုဟာဘုရားသခင်လား? ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါသလား? - သူ့ကြွေးကြော်မှုနဲ့ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့် လက္ခဏာဟာ တစ်ထပ်တည်းကျပါတယ်။ သူ့အသက်ရှင်မှုစရိုက် အဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့အတွက် ရန်သူများကို “ငါ၌အပြစ်ရှိကြောင်းကို သင်တို့တွင် အဘယ်သူဖော်ပြ(နိုင်)သနည်း?”၁၃ ဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ စိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားမှာ အတိမ်းအစောင်းလေးရှိရင် ထောက်ပြချင်နေကြတဲ့ သူတို့ကိုအခွင့်ပေးပေမယ့် အားလုံးတိတ် ဆိတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယေရှုဟာ စာတန်မာရ်နတ်ရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကို ခံရတဲ့အကြောင်း ကျနော်တို့ဖတ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ဖက်မှာ အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်စရာ ဘာတစ်ခုမှ ကျနော်တို့မကြားသိရပါဘူး။ သူ့နောက်လိုက်များကို အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ဖို့ သွန်သင်ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်း ဘယ်သောအခါမျှ မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။
ခေတ်အဆက်ဆက်က ကျနော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ သူတော်စင်များနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် လုံးဝကွဲဲပြားနေတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ရှုရင် ယေရှုရဲ့အပေါ်မှာ သီလချို့ယွင်းမှုလုံးဝမရှိတာဟာ အင်မတန်အံ့သြစရာကောင်းနေပါတယ်။ လူတွေဟာ ဘုရားနဲ့နီးကပ်လေလေ၊ သူတို့ရဲ့ကျရှုံးမှု၊ သီလမှောက်မှားမှုနဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပိုမိုတွေ့မြင်ရလေဖြစ် ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ တောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ကိုကပ်လေလေ၊ သူရေချိုးသန့်စင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သိမြင် လေလေပါ။ သာမန်လူသားတွေအတွက် ကိုယ့်ကျင့်တရားနယ်ပယ်မှာလည်း ထို့အတူပါပဲ။
အပြစ်ရဲ့ကမ္ဘာတလွှားပျံ့နှံ့မှုကိုလက်ခံဖို့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက သွန်သင်မှုခံယူခဲ့ကြတဲ့ ရှင်ယောဟန်၊ ရှင်ပေါလုနဲ့ ရှင်ပေတရုတို့အားလုံးက ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ကင်းမှုကို တညီတညွှတ်တည်းပြောနေကြတာဟာ အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ “ထိုသခင်သည် ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊ နှုတ်တော်၌လည်း မုသာကိုရှာမတွေ့”၁၄ လို့ ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ယေရှုအားသေဒဏ်စီရင်ချက်ချခဲ့သော ပိလတ်မင်းပင်လျှင် “(သူသည်) အဘယ်အပြစ်ကိုပြုဘိသနည်း?” လို့ မေးခဲ့ပါတယ်။ လူထုကိုနားထောင်ပြီးနောက် ပိလတ်မင်းက “ဤဖြောင့်မတ်သူ၏အသွေးနှင့် ငါသည်ကင်းရှင်း၏။ ဤအမှုကို သင်တို့ကြည့် ကြလော့” လို့ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ လူထုကြီးက (မိမိကိုယ်ကိုဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ဘုရားကိုလွန်ကျူးရာရောက် တဲ့အတွက်) ယေရှုကိုကွပ်မျက်ဖို့ မရပ်မနားတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ ခရစ်တော်ကိုကားစင်တင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရောမတပ် မှူးကြီးကပင် “စင်စစ် ဤသူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်ပေ၏”၁၅ လို့ ဝန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ယေရှု၏အသက်တာ - မကျန်းသူများကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။
ယေရှုဟာ မကျန်းမာခြင်းနဲ့ရောဂါတွေအပေါ် တန်ခိုးသြဇာရှိကြောင်း အစဉ်ပြသခဲ့တယ်။ ကျိုးပဲ့သူများကို လမ်းလျှောက်စေ ခဲ့တယ်၊ ဆွံ့အသူများကို စကားပြောစေခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ မျက်စိကန်းသူများကို မြင်စေခဲ့ပါတယ်။ သူကျန်းမာစေခဲ့တဲ့ ရောဂါတချို့ဟာဆိုရင် စိတ်ကုထုံးနဲ့ကုသလို့မရတဲ့ မွေးရာပါရောဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။
သာဓကအနေနဲ့ မွေးကတည်းကမျက်စိကန်းခဲ့တဲ့လူပါ။ ဘုရားကျောင်းအပြင်ဘက်မှာ တောင်းရမ်းနေကျလူတစ်ယောက် ဆိုတာ အားလုံးသိကြတယ်။ ယေရှုကသူ့ကို ကုသပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်။ အာဏာပိုင်တွေက အဲဒီသူတောင်းစားရောဂါ ပျောက်သွားတဲ့အခါ အဖြစ်အပျက်ကိုပြန်မေးကြတော့ “အကျွနု်ပ်သည် အထက်ကမျက်စိကန်း၍ ယခုမျက်စိမြင်သည့် အကြောင်းတစ်ခုကို(သာ) အကျွနု်ပ်သိသည်” လို့ ဖြေပါတယ်။ ထိုဘာသာရေးအာဏာပိုင်များက ဒီရောဂါပျောက်ကင်းစေ သူကို ဘုရားသားတော်အဖြစ် လက်မခံကြတာကို သူအံ့သြမိတယ်။ ဒါကြောင့်သူက “အမိဝမ်းတွင်းကပင် မျက်စိကန်းသော သူကို မျက်စိမြင်စေခြင်းငှာ တတ်နိုင်သည်ကို ကမ္ဘာဦးမှစ၍ မကြားစဖူး”၁၆ လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူ့အတွက်တော့ အဲဒီအထောက်အထားဟာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။
ယေရှုရဲ့အသက်တာ - သဘာဝတရားကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း
ယေရှုဟာ သဘာဝတရားအပေါ် သဘာဝလွန်တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့တယ်။ နှုတ်ထွက်စကားနဲ့တင် ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့ လေပြင်းလှိုင်းလုံးတွေနဲ့အရှိန်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းကို ငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ်။ လှေပေါ်ပါတဲ့လူတွေက အံ့သြတုန်လှုပ်ပြီး “ဤသူကား အဘယ်သို့သောသူနည်း? လေနှင့်ပင်လယ်သည် သူ၏စကားကို နားထောင်ပါသည် တကား!”၁၇ လို့ အချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်တဲ့။ သူဟာ မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ ရေကနေစပျစ်ရည်အဖြစ် ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ ပေါင်မုန့်လုံးငါးလုံးနဲ့ ငါးနှစ်ကောင်တည်းကနေ ၅ဝဝဝ ကျော်တဲ့လူအုပ်ကြီးကို ဝအောင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ သူမရဲ့တစ်ဦး တည်းသောသားကို သေရာကပြန်ရှင်စေပြီးတော့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့မုဆိုးမကို နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်။
ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦး လာဇရုဟာသေလွန်ပြီး လေးရက်တိတိ ဂူသွင်းမြှုပ်နှံခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ယေရှုက “လာဇရု၊ ထွက်၍လာလော့!” လို့ ဟစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာ အံ့သြဖွယ်ရာ သေရာကနေပြန်ရှင်လာခဲ့တာ လူများစွာတို့ရဲ့ကိုယ််တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးခြားဆုံးအချက်က သူ့ကိုမလိုမုန်းထားသူတွေကိုယ်တိုင် ဒီအံ့သြဖွယ်လက္ခဏာကို မငြင်းဆိုခဲ့ကြပါဘူး။ အဲဒီအစား သူ့ကိုသတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဟာ “သူ့ကို ဤသို့စေလွှတ်ထားလျှင် လူခပ်သိမ်းတို့သည် ယုံကြည်ကြ လိမ့်မည်”၁၈ လို့ကို ပြောခဲ့ကြတာပါ။
ယေရှုဟာ သူပြောခဲ့သလို ဘုရားစင်စစ်လား?
ယေရှုဘုရားစင်စစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အမြင့်ဆုံးသက်သေဟာ သူကိုယ်တိုင် သေရာကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပါပဲ။ သူဘယ်လိုပုံစံ မျိုးနဲ့ အသတ်ခံရမယ် ပြီးတော့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ သေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုတာ သူ့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာ ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ရှင်းလင်းစွာ ကြိုတင်ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာဟာ အကြီးဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါဟာ အတည်ပြုစစ်ဆေးဖို့လွယ်ကူတဲ့ ကြွေးကြော်မှုတစ်ခုပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ဖြစ်မလာဘူး။ သူပြောသလို ဘုရားမှန်တယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုကောင်းပြုမယ် ဒါမှမဟုတ် ငြင်းပယ်ဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ ယေရှုသေခြင်းကထမြောက်မယ် မထမြောက်ဘူးဆို တာက အတည်ပြုရင်ပြုမယ်၊ မပြုရင် သူအောက်ပါအတိုင်းပြောကြားတဲ့အရာတွေကို ဟာသပြက်လုံးတစ်ခုလို ဖြစ်စေရင် ဖြစ်စေမယ်-
“ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။”၁၉ “ငါသည် ဤလောက၏အလင်းဖြစ်၏။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည် မှောင်မှိုက်၌မသွားမလာ။ အသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည်”၂ဝ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအား “ထာဝရအသက်ကိုလည်း ငါပေး၏..”၂၁ လို့ မိန့်မြွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီဟာက “လူသားသည် လူတို့လက်သို့အပ်နှံခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ခံရမည်။ ခံပြီးမှ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်”၂၂ ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ကြိုတင်ဟောကြားချက်ကို သက်သေထူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“စကားလုံးတွေက တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူမဆို ကြွေးကြော်လို့ရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် နာဇရက်မြို့သားယေရှုမှာတော့ … သူ့ကြွေးကြော်ချက်ကိုကျောထောက်နောက်ခံဖို့ သူ့မှာအထောက်အထားတွေ များစွာရှိပါတယ်။”
ခရစ်တော်ဟာထမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘုရားရှိတယ်၊ ဘုရားဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ကိုကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာကို အသေအချာ သိရှိနိုင်ပါပြီ။ စကြာဝဠာကြီးမှာလည်း အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရည်ရွယ် ချက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိလာမယ်။ ပြီးတော့ ဒီဘဝမှာ အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါပြီ။
တစ်ဖက်ကတော့ ခရစ်တော်သေရာကမထမြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဟာ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျမှန်ကန်တဲ့ ခိုင်လုံ ခြင်းနဲ့စစ်မှန်ခြင်း ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခြင်္သေ့တွေအစားခံဖို့ သီချင်းဆိုရင်း ခြင်္သေ့တွင်းထဲဆင်းခဲ့ကြတဲ့ အာဇာနည်တွေ၊ ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းသတင်းကို သယ်ဆောင်ရင်း အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ယနေ့ခေတ်သာသနာပြုဆရာများဟာလည်း အလှည့်အစားခံ သနားစရာ လူ့အန္ဓများသက်သက်ပဲ ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက “ခရစ်တော်သည် ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌ အကျိုးမရှိ။ သင်တို့ယုံကြည် ခြင်း၌လည်း အကျိုးမရှိ။”၂၃ လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ရှင်ပေါလုဟာ သူ့ရဲ့ရပ်တည်ရေးသားဟောပြောချက်တစ်ခုလုံးကို ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာထမြောက်ခြင်းအပေါ်မှာပဲ အခြေပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုက သူဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ပါသလား?
သူပြုခဲ့တဲ့အံ့သြဖွယ်ပြာဋိဟာများကို ထောက်ရှုရင် ယေရှုဟာ ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေသတ်ခြင်းကို အလွယ်တကူ ရှောင်ရှား နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုဟာ သူအဖမ်းမခံရခင်မှာ “ငါ့အသက်ကို အဘယ်သူမျှ မလုမယူ။ ကိုယ်အလိုအလျောက် ငါစွန့်၏။ ကိုယ်အသက်ကို စွန့်ရသောအခွင့်နှင့် နောက်တစ်ဖန် ကိုယ်အသက်ကို ယူပြန်ရသောအခွင့်သည် ငါ၌ရှိ၏။”၂၄ လို့ မြွက်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အဖမ်းခံရစဉ်မှာလည်း သူ့မိတ်ဆွေ ရှင်ပေတရုက သူ့ကိုကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ယေရှုကပေတရုကို “သင့်ဓားကို သူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့။ … ယခုပင် ငါ့အဖကို ငါတောင်းနိုင်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ တောင်းလျှင် ကောင်းကင် တမန်နှစ်တပ်မက ငါ့ထံသို့ စေလွှတ်တော်မည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်သည်မထင်သလော?”၂၅ လို့ ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။ သူဟာ ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာ ထိုကဲ့သို့သော အခွင့်အာဏာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သေခြင်း အတွက် လိုလိုလားလား ခံယူခဲ့တာသာဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုအသေခံခြင်းဟာ ရောမအစိုးရက ရာစုနှစ်များစွာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ မြင်နေကျ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့အသေသတ်ခြင်းပုံစံ ဖြစ်တဲ့ အများပြည်သူရှေ့ ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေသတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုအပေါ်စွပ်စွဲချက်ကတော့ (ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားပါလို့ ကြွေးကြော်ပြီး) ဘုရားကိုလွန်ကျူးပြောဆိုတဲ့အမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုကတော့ ဒါဟာ ကျနော်တို့အပြစ်တွေ အတွက် ပေးဆပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ယေရှုဟာ အဖျားမှာအမွှာလိုက်ဖြာထွက်နေတဲ့ သံ (သို့) အရိုးတွေတပ်ထားတဲ့ ခိုင်မာစွာကျစ်ထားတဲ့ကြာပွတ်တွေနဲ့ အရိုက် ခံခဲ့ရတယ်။ သရော်တဲ့အနေနဲ့ ဆူးရှည်တွေရစ်ဝိုင်းထားတဲ့သရဖူကို ဦးခေါင်းခွံထဲနှက်သွင်းထားတယ်။ သူတို့ဟာ ယေရုရှ လင်မြို့ပြင်က ကွပ်မျက်ရာတောင်ပေါ်အထိ လမ်းလျှောက်စေခဲ့ကြတယ်။ သူ့လက်ကောက်ဝတ်နဲ့ ခြေထောက်အစုံကို သံချောင်းအကြီးများနဲ့ ရိုက်နှံထားတဲ့ သစ်သားကားတိုင်ပေါ်မှာ တင်မတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ကို နောက်ဆုံးထွက်သက်အထိ အဲဒီမှာပဲ တင်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ သူသေရဲ့လားဆိုတာ အတည်ပြုဖို့လည်း သူ့နံဘေးထဲကို လှံချွန်ထိုးစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကို ကားတိုင်ပေါ်ကပြန်ချယူပြီး စိုစွတ်စေးကပ်တဲ့နံ့သာများနဲ့ လိမ်းကျံစီမံထားတဲ့ မမ်မီရုပ်ကလာပ် တွေလို ပိတ်သားနဲ့ လွှားပတ်ထားကြတယ်။ သူ့ရုပ်အလောင်းကို ကျောက်သားအတိပြီးတဲ့ ဂူဗိမာန်ထဲမှာ လျောင်းသိပ်ထား ကြတယ်။ အဲဒီဂူသင်္ချိုင်းဝကို လုံခြုံစေဖို့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ကျောက်တုံးကြီးကို လှိမ့်ချပိတ်ဆို့ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုက သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ ပြောခဲ့တာကို လူတိုင်းသိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဂူသင်္ချိုင်းမှာ ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ရောမစစ်သား အစောင့်အကြပ်တွေကို တပ်ချထားကြတယ်။ ပြီးတော့ ဂူသင်္ချိုင်းအပြင်ဘက်မှာ အစိုးရပိုင်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ရောမအစိုးရတံဆိပ်ကိုလည်း ခတ်နှိပ်ထားကြပါတယ်။
ယေရှုဟာဘုရားလား? ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ဖူးပါသလား? - ဂူသင်္ချိုင်းကို အဲဒီလိုကာကွယ်စောင့်ကြပ်ထားကြ ပေမယ့် သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ သင်္ချိုင်းဂူကိုယခင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးဟာ ခပ်လှမ်းလှမ်းကို လျှောထွက်လစ် ဟနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အလောင်းတော်ဟာ မရှိတော့ပါဘူး။ မြှုပ်နှံတုန်းကပတ်ရစ်ထားတဲ့ ပိတ်ထည်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာမရှိ တော့ဘဲ ဂူထဲမှာ ဖြေလျော့နေတာကိုသာ တွေ့ရတော့တယ်။
သတိပြုဖို့အရေးကြီးတဲ့အချက်က ဝေဖန်ရှုတ်ချသူများကော ယေရှုနောက်လိုက်များကပါ ဂူသင်္ချိုင်းဟာဗလာနတ္ထိဖြစ်နေပြီး အလောင်းတော်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို အတည်ပြုလက်ခံကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သတင်းဖြန့်ထားတဲ့ အဦးဆုံးဖြေရှင်းချက်ကတော့ တပည့်တော်များက အစောင့်များအိပ်နေတုန်း အလောင်းတော်ကို ခိုးထုတ်သွားကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီအချက်က ယုတ္တိမတန်ပါဘူး။ အစောင့်တွေဟာ ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့ ရောမစစ်သားတွေချည်းဖြစ်ပြီး တာဝန်ချိန်မှာအိပ်ပျော်နေရင် သေဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ထိ အပြစ်ကြီးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တပည့်တော်များဟာလည်း ယေရှုဟာသေခြင်းမှပြန်ထမြောက်ပြီး အသက်ရှင်နေတယ်လို့ ကြွေးကြော်ကြတဲ့ အတွက် (တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ သီးသန့်စီ) ညှင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်း ခံကြရပါတယ်။ လူတွေဟာ တကယ်လို့မှားနေရင်တောင် သူတို့မှန်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အရာအတွက် အသေခံရဲကြတာမှန်ပါတယ်။ သို့သော် လိမ်ညာမှုပါလို့ သူတို့သိတဲ့အရာ တစ်ခုအတွက်တော့ အသေခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ လူတစ်ဦးဟာ အမှန်တရားကိုဖွင့်ပြောတယ်ဆိုရင် ဒီအတွက် သူ့အသက်ကိုပင် စတေးရဲတာဖြစ်ပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက အလောင်းကိုရွှေ့ပြောင်းထားကြတာကော ဖြစ်နိုင်မလား? တကယ်တော့ လူတွေသူ့ကိုယုံကြည်လာ ကြမှာစိုးလို့ပဲ သတ်ခဲ့ကြတာလေ။ ဒါကြောင့် ဒါလည်းပဲ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းရှိနေရင် ယေရုရှလင်လမ်းမတွေမှာ ချိတ်ဆွဲထုတ်ပြနိုင်ကြမှာလေ။ ဒါဆို တစ်ချက်တည်းနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာအစပျိုးလာတဲ့အချိန် မှာပဲ အောင်မြင်စွာ ဖိနှိပ်ငြိမ်းသတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုတာက သူတို့ဆီမှာ ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ သက်သေထူနေပါတယ်။
နောက်သီအိုရီတစ်ခုကတော့ အမျိုးသမီးများဟာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုက သူတို့စိတ်အစဉ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီး ထွေပြားစေပြီး အာရုံဦးရဲ့ဝေဝါးမှုကြောင့် လမ်းမှားပြီး တခြားဂူသင်္ချိုင်းတစ်ခုကို ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ သူတို့ဟာ ပရိဒေဝဖိစီးမှုကြောင့် သင်္ချိုင်းထဲ မှာဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက် ခရစ်တော်ထမြောက်သွားပြီလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အမျိုးသမီးများက သင်္ချိုင်းမှားပြီးသွားခဲ့ရင်တောင် ယဇ်ပုရောဟိတ်များနဲ့ အခြားမလိုမုန်းထားသူတွေက သင်္ချိုင်းအမှန်ကို သွားပြီး အလောင်းကိုမပြသခဲ့ကြသလဲ?
တခြားဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုက တချို့လူတွေခေါ်တဲ့ “မေ့မျောသွားခြင်းသီအိုရီ” ပါ။ ဒီအမြင်အရ ခရစ်တော်ဟာ အမှန်တကယ် သေဆုံးမသွားခဲ့ဘူး။ သေသွားပြီလို့ မှားယွင်းစွာ သတင်းပေးပို့ကြတာဖြစ်တယ်။ သူဟာ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု၊ နာကျင်မှုနဲ့ သွေးထွက်လွန်ကဲမှုတို့ကြောင့် မေ့မျောသွားပြီး ဂူသင်္ချိုင်းရဲ့အအေးဓာတ်ကြောင့် သတိပြန်လည်လာတာလို့ ဆိုပါတယ်။ (ဒီအယူအဆက စစ်သားတွေဟာ စစ်ဆေးချက်အရ သူအမှန်တကယ်သေရဲ့လားဆိုတာအတည်ပြုဖို့ သူ့နံကြားထဲကို လှံထိုးစိုက်ခဲ့ကြတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သတိမပြုမိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။)
“လူတွေဟာ တကယ်လို့မှားနေရင်တောင် သူတို့မှန်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြတဲ့အရာအတွက် အသေခံရဲကြတာမှန်ပါတယ်။ သို့သော် လိမ်ညာမှုပါလို့ သူတို့သိတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်တော့ အသေခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။”
ခရစ်တော်ဟာ အရှင်မြှုပ်နှံခံရပြီး မေ့မျောသွားခဲ့တယ်လို့ပဲ ယူဆကြည့်ရအောင်။ ဒါဆို အစားအစာ (သို့) ရေ (သို့) ဂရုစိုက်မှု ဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲ စိုထိုင်းတဲ့ဂူသင်္ချိုင်းထဲမှာ သုံးရက်တောင် အသက်ရှင်နေခဲ့မယ်လို့ ယုံကြည်နိုင်ပါသလား? သင်္ချိုင်းအဝတ် အစားတွေကို ခွာချွတ်၊ သင်္ချိုင်းဝကကျောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ထုတ်၊ ရောမအစောင့်တွေကိုကျော်လွှား၊ ပြီးတော့ သံချွန်နဲ့ထိုး ဖောက်ခံထားရတဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ မိုင်တွေချီလမ်းလျှောက်နိုင်လောက်အောင် အားအင်တွေရှိခဲ့လိမ့်မလား? ဒါလည်းပဲ အဓိပ္ပာယ်မရှိသလောက်ပါပဲ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေ၊ နောက်လိုက်များကို ယေရှုဘုရားဖြစ်ခြင်းအပေါ် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မြဲစေတဲ့အချက်က ဗလာနတ္ထိဖြစ်နေတဲ့ ဂူသင်္ချိုင်း မဟုတ်ပါဘူး။
ယေရှုသေရာမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး အသက်ရှင်တယ်၊ သူဟာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒီအချက်တစ်ခုတည်းက သူတို့ကို ယုံကြည်လက်ခံစေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို အခိုင်အမာယုံကြည်စေတဲ့အချက်က ယေရှု လူကိုယ်တိုင် လူ့အသွေး အသားနဲ့ပြသပြီး သူတို့နဲ့အတူစားသောက် ပြောဆိုဆက်ဆံကြတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူတွေထဲက ရှင်လုကာက “အသေခံတော်မူပြီးလျှင်၊ တမန်တော်တို့အား အရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ကိုယ်ကိုပြ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူလျက်၊ မိမိအသက်ရှင်သည်အကြောင်းကို ခိုင်ခ့ံသောသက်သေအများအားဖြင့် ပြတော်မူ၏။”၂၆ လို့ ယေရှုအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသားသူလေးဦးလုံးက ယေရှုမြှုပ်နှံခံရပြီးနောက် သိသာထင်ရှားစွာ အသက်ရှင်လျက် ခန္ဓာအားဖြင့် ပြသတော်မူတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြကြပါတယ်။ ယေရှုဟာ တပည့်တော်များနဲ့အတူရှိတဲ့အခေါက်မှာ သောမက အဲဒီမှာ မရှိပါဘူး။ သူတို့ကသူ့ကို ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြကြတဲ့အခါ သူမယုံကြည်ပါဘူး။ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ “လက်တော်၌ သံရိုက်ရာချက်ကိုမမြင်၊ သံရိုက်ရာချက်ကို လက်ညှိုးနှင့်မတို့မစမ်း၊ နံဖေးတော်ကိုလည်း လက်နှင့်မစမ်းမသပ် ရလျှင် အကျွနု်ပ်မယုံ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပတ်အကြာ ယေရှုသူတို့ထံပြန်လာတဲ့အခါမှာ သောမရှိနေပါတယ်။ ယေရှုကိုသောမကို “သင်၏လက်ညှိုးကိုဆန့်၍ ငါ့လက်ကိုကြည့်လော့။ သင်၏လက်ကိုဆန့်၍ ငါ့နံဖေးကိုစမ်းသပ်လော့။ ယုံမှားခြင်းမရှိနှင့်။ ယုံလော့” လို့ မိန့်တော်မူတဲ့အခါ သောမက “အကျွနု်ပ်၏အရှင်၊ အကျွနု်ပ်၏ဘုရားသခင်ပါတကား!”လို့ အံ့သြတုန်လှုပ်စွာ တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခါ ယေရှုကသူ့ကို “သင်သည် ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့် ယုံခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏”၂၇ လို့ မြွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့်များ ယေရှုဟာ ဒါတွေအားလုံးကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလဲ? ဒါဟာ ကျနော်တို့ သူ့ထံ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒီဘဝမှာ ဘုရားကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှုဟာ သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုထဲ ရှိခြင်းအားဖြင့် များစွာသာ၍ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံသောဘဝတစ်ခုကို ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်။ ယေရှုက “ငါမူကား … သက်လွတ်ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း။”၂၈ လို့ မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ယခုပင် သူနဲ့ကျွမ်းဝင်ဆက်သွယ်ရေးတစ်ခုကို သင်အစပြုနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ် ဒီဘဝမှာကော သေလွန်ပြီးနောက် ထာဝရအထိတိုင် ဘုရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စတင်သိရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော် ကတော့ ဒီအရာပဲဖြစ်ပါတယ် -
“ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။”၂၉
ယေရှုဟာ ကားတိုင်ထက်မှာ ကျနော်တို့အပြစ်ကို ကိုယ်တိုင်ယူဆောင်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့အပြစ်ဟာ သူနဲ့ကျနော်တို့ ကြားမှာ အဟန့်အတားတစ်ခုမဖြစ်တော့စေရန် ကျနော်တို့အပြစ်အတွက် အပြစ်ဒဏ်ကိုခံယူဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြစ်အတွက် သူက အကျေအလည်ပေးချေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် အပြည့်အဝခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ သူနဲ့ဆက်သွယ် ရေးကို ကျနော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဆက်သွယ်ရေးကို ဘယ်လိုအစပြုမလဲဆိုရင် ဒီလိုပါ။
ယေရှုက “ငါသည် (သင်၏နှလုံးသား)တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကိုကြား၍ တံခါးကို ဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ငါဝင်”၃ဝ မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုပဲ သင့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်လာဖို့ ယေရှုခရစ်တော်ကို ခေါ်ဖိတ်နိုင်ပါတယ်။ စကားလုံးတွေက အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ အရေးကြီးတာက သင့်အတွက်သူပြုပေးခဲ့ပြီး ယခုကမ်းလှမ်းနေတဲ့အတိုင်း သူ့ကိုတုံ့ပြန်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ဒီလိုပုံစံမျိုး ပြောနိုင်ပါတယ်- “ယေရှု၊ ကိုယ်တော်၌ယုံကြည်ပါတယ်။ အကျွန်ုပ်အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွနု်ပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီး ယခုပင် အသက်တာထဲဝင်ရောက်ဖို့ တောင်းခံပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ကို သိရှိပြီး လိုက်လျှောက်လိုပါတယ်။ ကျွနု်ပ်အသက်တာထဲ ယခုပင် ဝင်ရောက်လာပြီး ကိုယ်တော့်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးကို ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။”
ယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးပြီဆိုရင် သူ့ကိုပိုမိုသိကျွမ်းလာဖို့ရန် သင်ကြီးထွားရင့်ကျက်လာဖို့ ကျနော်တို့ကူညီလိုပါတယ်။ ဘယ်လို နည်းနဲ့မဆို ကျနော်တို့ကူညီနိုင်ဖို့ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါလင့်ခ်များထဲမှတစ်ခုကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နှိပ်ပေးပါ။
Victors Books မှ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော Paul E. Little ၏ “Know Why Believe” ကို ဆီလျော်အောင်အသုံးပြု ထားသည်။ မူပိုင်ခွင့်အမှတ် 1988, SP Publications, Inc., Wheaton, IL 60187. ခွင့်ပြုချက်အရ အသုံးပြုသည်။
(၁) ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ရး၂၉ (၂) ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၆း၁၅-၁၆ (၃) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၅း၁၈ (၄) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၃၃ (၅) ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၄း၆၁-၆၄ (၆) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၈း၁၉။ ၁၄းရ (၇) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၂း၄၅။ ၁၄း၉ (၈) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၂း၄၄။ ၁၄း၁ (၉) ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း ၉း၃၇ (၁ဝ) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၅း၂၃ (၁၁) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၅း၂၃ (၁၂) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၃၈ (၁၃) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၈း၄၆ (၁၄) ရှင်ပေတရုသြဝါဒစာ ပ-စောင် ၂း၂၂ (၁၅) ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂ရး၅၄ (၁၆) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၉း၂၅၊ ၃၂ (၁၇) ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း ၄း၄၁` (၁၈) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၁း၄၈ (၁၉) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၄း၆ (၂ဝ) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၈း၁၂ (၂၁) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၂၈ (၂၂) ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း ၉း၃၁ (၂၃) ကောရိန်သုသြဝါဒစာ ပ-စောင် ၁၅း၁၄ (၂၄) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၁၈ (၂၅) ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂၆း၅၂-၅၃ (၂၆) တမန်တော်ဝတ္ထု ၁း၃ (၂၇) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၂ဝး၂၄-၂၉ (၂၈) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁ဝး၁ဝ (၂၉) ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း ၃း၁၆ (၃ဝ) ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၃း၂ဝ